ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမပြုမီနောက်လိုက်များမှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြေအနေများနှင့်စည်းကမ်းချက်များကိုသင်ဖတ်ရှုဖို့အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်များကိုဒီဂျစ်တယ်ပုံစံနှင့်အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၀ န်ဆောင်မှုများရောင်းချခြင်း။
အသုံးပြုသူသည်ဤစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအခြေအနေများကိုဖတ်ရှုပြီးလက်ခံပြီးနောက်မှသာဤ Followers.online ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရယူနိုင်သည်။
ဤအခြေအနေများကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့်၊ အသုံးပြုသူသည်ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကိုထိန်းချုပ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်စည်းကမ်းချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါကသင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုငှားရမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
Followers.online သည်ဤအခြေအနေများကိုအချိန်မရွေးပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများသည်အသုံးအနှုန်းများကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားပါက၊ Follower.online သည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကြေငြာချက်တစ်ခု တင်၍ သင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
ပေးထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အနည်းဆုံးအသက် ၁၈ နှစ်သာရှိသောတရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်လူများအတွက်သာရနိုင်သည်။
ဤဝေါဟာရများကိုနောက်ဆုံးအကြိမ် 14/04/2016 တွင်နောက်ဆုံးအကြိမ်နောက်ဆုံးဖြစ်သည်
သတင်းအချက်အလက်အသင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး (LSSICE) ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာဥပဒေ ၃၄/၂၀၀၂ ပါပြprovisions္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီအောက်ပါအချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည် -
• AGPD တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း -“ သုံးစွဲသူများနှင့်ဝဘ်အသုံးပြုသူများ”“ ဖောက်သည်များနှင့်ပေးသွင်းသူများ” ။
•လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုဆိုသည်မှာ online marketing ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Follower.online သည်အောက်ဖော်ပြပါ ၀ န်ဆောင်မှုများကို၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအခြေအနေများနှင့်အကျုံးဝင်သည်။
•အွန်လိုင်း / အော့ဖ်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာဒီဇိုင်း။
•သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်အမျိုးသားအဆင့် (သို့) အပိုင်းလိုက်တင်ပို့ခြင်း။
• JPG တွင်အခြေခံအရပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် RAW ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
•ဝက်ဘ်၊ ဘလော့နှင့် e-Commerce အတွက် SEO အကြံပေးခြင်း။
•ဝဘ်ဆိုက်အတွက်အခြေခံ SEO ။
•လင့်ခ်ပရိုဖိုင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ဖန်တီးခြင်း (SEO off page)
• WordPress သို့မဟုတ် Joomla ကိုတပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း။
•အကြောင်းအရာအပြင်အဆင် - သတင်းစာများ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ ကတ်တလောက်များ၊ စာအုပ်များ၊ ဘရိုရှာများ၊ pdf နှင့် ebook များ၊
ဝက် (ဘ်) အတွက်ပိုစတာများ၊ ကဒ်များ၊
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့်လူမှုရေးအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှု (Facebook၊ Twitter, Pinterest, YouTube, Tuenti, Google+)
• SEM လှုပ်ရှားမှုများ (AdWords, Facebook ကြော်ငြာ၊ တွစ်တာကြော်ငြာများ)
• Analog ဇယားများကိုနည်းပညာဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု။
အခွအေနေအဖြစ် ကမ်းလှမ်းသောဝန်ဆောင်မှုများကိုစာချုပ်ချုပ်ရန်, သင်သက်ဆိုင်သော Followers.online ပုံစံပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်မှတ်ပုံတင်သတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့လိုအပ်သည်။ သင်ပေးအပ်သည့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်သည်အမြဲတမ်းတိကျမှန်ကန်မှုရှိရမည် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ပါကစည်းကမ်းချက်များကိုဖောက်ဖျက်ရာရောက်ပြီးနောက်လိုက်များနှင့်စာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
အချို့ဝန်ဆောင်မှုများတွင်တတိယပါတီဖြေရှင်းချက်များပါ ၀ င်နိုင်သည်။ Follower.online သည် third-party ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအချို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်အတွက် Followers.online နှင့်ဆက်စပ်သည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအဖြစ်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုတွင်အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ထားသည့်လုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်များပါ ၀ င်နိုင်ပြီးနောက်လိုက်များနှင့်လိုက်နာရန်စည်းကမ်းများနှင့်အညီအသုံးပြုရမည်ဟုသင်သဘောတူသည်။ Online နှင့်၎င်း၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မဆိုနောက်လိုက်မှပေးထားသောလုံခြုံရေးနည်းပညာကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ ရှောင်လွှဲခြင်း၊ အင်ဂျင်နီယာကိုပြောင်းပြန်လုပ်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုတားမြစ်သည်။
စနစ်သို့မဟုတ်ကွန်ယက်၏လုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုများသည်အရပ်ဘက်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
Follower.online အားလက်ခံသည့်ငွေပေးချေမှုပုံစံများကိုနောက်လိုက်များနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးဆောင်ရန်သင်သဘောတူသည်။ (အခွန်များနှင့်နောက်ကျသင့်သောပေးချေမှုများအပါအ ၀ င်)
ငွေပေးချေမှုကိုအမြဲတမ်း ၁၀၀% ကြိုတင်ပေးချေပြီးငွေပေးချေမှုကိုအတည်ပြုသည့်အခါ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးလိမ့်မည်။
ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုစီနှင့် / သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုချင်းစီအတွက်သက်ဆိုင်သောစျေးနှုန်းများသည်စပိန်ပိုင်နက်အတွင်းရှိအရောင်းအ ၀ ယ်များအတွက် VAT (Value Added Tax) အပါအ ၀ င်အမှာစာရက်စွဲပေါ်တွင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်းများဖြစ်သည်။
ဖော်ပြထားသောအခွန်နှင့်ဥရောပညွှန်ကြားချက် ၂၀၀၈/၈ / EC တို့၏စည်းမျဉ်းဥပဒေကိုဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်ဥပဒေ ၃၇/၁၉၉၂ ပါပြprovisions္ဌာန်းချက်များအရစစ်ဆင်ရေးသည်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိနိုင်သည် ဝယ်သူနေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ်မူတည်သည် နှင့်အတူတူပင်ပြုမူသောအခြေအနေ (လုပ်ငန်းရှင် / ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းစီ) ။ အကျိုးဆက်အနေနှင့်အချို့ကိစ္စများတွင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ အမှာစာ၏နောက်ဆုံးဈေးကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Follower.online မှရောင်းချသော ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ် infoproductos များ၏စျေးနှုန်းမှာ ၀ ယ်သည် စပိန်အခွန်။ သို့သော်သင်၏အမှာစာ၏နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းမှာအမိန့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် VAT နှုန်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ၏အခြားနိုင်ငံများသို့ပေးပို့သောအမှာစာများအတွက် စပိန် VAT ကိုနုတ်မယ် နှင့် ဦး တည်နိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာ VAT ကိုအခွန်နှုန်းကိုလျှောက်ထားပါလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းသည်သင်၏အမှာစာအတည်ပြုချက်အရပေါ်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းများ၏ ဦး တည်ရာနိုင်ငံနှင့်သက်ဆိုင်သည့် VAT နှုန်းကိုထင်ဟပ်လိမ့်မည်။
၀ န်ဆောင်မှုများ၏စျေးနှုန်းသည်နောက်လိုက်များ၏တစ် ဦး တည်းသောသီးသန့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်သည်။ စျေးနှုန်းလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကမ်းလှမ်းမှုများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်စျေးနှုန်းကာကွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်အမ်းငွေများမပေးပါ။
တစ်ခုချင်းစီကိုတောင်းဆိုမှုကို Foll.online အားဖြင့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုချက်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
Follower.online သည် clients အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာဖြေရှင်းနည်းများကို Followers.online ၏ကွန်ယက်သို့လွှဲပြောင်းခြင်းအပါအဝင်ပေးနိုင်ပါသည်။
“ အကန့်အသတ်မရှိ” ဟူသောဝေါဟာရကိုမျှတစွာအသုံးပြုသောအပိုဒ်ခွဲနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ မျှတသောအသုံးပြုမှုနှင့်ဆိုင်သောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို followers.online မှ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ Follower.online သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအလွဲသုံးစားပြုရန်စဉ်းစားသောဖောက်သည်များကို followers.online မှဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။
Follower.online သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
Follower.online သည်ဤစာချုပ်၏ ၀ န်ဆောင်မှု၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်အနှောင့်အယှက်မရှိကြောင်း၊ ၎င်း၏ဆာဗာများပေါ်တွင်တင်ထားသောဒေတာများဆုံးရှုံးခြင်း၊ စီးပွားဖြစ်လုပ်ဆောင်မှုများကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏လည်ပတ်မှုမှရရှိသောမည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆိုအာမခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမှရရှိသောမျှော်လင့်ချက်များသို့မဟုတ်
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမှမမှန်ကန်သောအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောပြိုကွဲမှုများ၊ အထူးသဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့် / သို့မဟုတ်တတိယပါတီများက၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှပြုလုပ်သောလှုပ်ရှားမှုနှင့်အသုံးပြုမှုအမျိုးအစားများအတွက်မသင့်လျော်သော ၀ န်ဆောင်မှုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမှဆင်းသက်လာသူများ။
၃။ ပါတီများအကြားနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သဘောတူညီမှုဖြင့်ယခင်ကသဘောတူခဲ့သောထူးခြားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုထိန်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်စီစဉ်ထားသောရပ်တန့်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြောင်းလဲခြင်း။
၄။ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်လုံးဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမဖြစ်နိုင်သည့်တတိယပါတီ၏ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ကွန်ပျူတာတိုက်ခိုက်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများ။
ဤနည်းအားဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်ဤအခြေအနေများကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအကန့်အသတ်ဖြင့်ထမ်းဆောင်ရန်သဘောတူသည်။ ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပျက်ကွက်မှုများ၊ အမှားအယွင်းများနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက် Online SL မှစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောသို့မဟုတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့်မည်သည့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားကိုမဆိုတောင်းဆိုရန်လုံးဝငြင်းဆိုသည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းနှင့်မကောင်းသောအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသောအမှားအယွင်းများ၊ ပျက်စီးမှုများအတွက် Online SL သည်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မျှတာဝန်မရှိပါ။ Online SL နှင့် Client အကြားဆက်သွယ်မှုနည်းပါးခြင်းနှင့်အဓိကအားဖြင့်အသေးစားအကျိုးဆက်များကို Online SL မှတာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အီးမေးလ်များကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိသောကြောင့်သို့မဟုတ်သုံးစွဲသူများမှတ်ပုံတင်သူနောက်လိုက်များ၏သုံးစွဲသူမှတ်ပုံတင်တွင်သုံးစွဲသူများမှပေးသောအချက်အလက်များ၏မှားယွင်းသောမှားယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ။
ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစိတ်ကျေနပ်မှုမရှိပါကသင်သည် Followers.online နှင့်ဆက်နေရန်မလိုအပ်ပါ။
Follower.online သည်အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များနှင့်တာဝန်ယူမှုမရှိပဲနောက်လိုက်များနှင့်လိုက်သောကန်ထရိုက် ၀ န်ဆောင်မှုများအားလုံးအားရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။
စာချုပ်ဖျက်သိမ်းပြီးပါက ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်သင့်အခွင့်အရေးသည်ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းသွားမည်။
•မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုစဉ်အတွင်းပေးအပ်ထားသည့်အချက်အလက်များ၏တစ်ပိုင်းတစ်စသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ၊
• Followers.online မှပေးသောလုံခြုံရေးနည်းပညာအားမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုပြောင်းလဲခြင်း၊ ရှောင်တိမ်းခြင်း၊ အင်ဂျင်နီယာကိုပြန်ပြောင်းခြင်း၊
•စာချုပ်တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်နာရီများထက်နာရီပေါင်းများစွာလိုအပ်သောကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှုအလွဲသုံးစားမှုကိစ္စများ။
၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၄ င်းတို့၏စျေးနှုန်းများကို ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှပြသသော ၀ န်ဆောင်မှုများစာရင်းတွင် ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ စျေးနှုန်းအမှားများကိုရှောင်ရှားရန်အသုံးပြုသူများကိုဝက်ဘ်ဆိုက်၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းများကိုရယူရန်တောင်းဆိုထားသည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို၊ လုပ်ငန်းစဉ်အမှာစာများသည်တရား ၀ င်သည့် အချိန်မှစ၍ ၇ ရက်ကြာအခြေအနေများကိုထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သည်။
ထုတ်ယူခြင်းသည် (၁၄) ရက်အတွင်းတရားဝင်ကုန်သွယ်မှုနှင့်ပြန်လည်ကုန်သွယ်ရန်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု၏စားသုံးသူ၏စွမ်းအားမည်သည့်ရှင်းပြချက်မျှပေးရန်မလိုပဲပြစ်ဒဏ်ခံရစရာမလိုပဲ။
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၄၅ တွင်ဖော်ပြထားသောအောက်ပါကိစ္စများတွင်ထုတ်ယူခွင့်ကို (ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ချို့ယွင်းချက်သို့မဟုတ်ချို့ယွင်းချက်မှအပ) မှအသုံးမပြုနိုင်ပါ။
•အသံသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ discs နှင့်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များသုံးစွဲသူများမှတံဆိပ်ခတ်ထားသည့်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များနှင့်အီလက်ထရွန်နစ်စနစ်ဖြင့်ထောက်ပံ့ထားသောကွန်ပျူတာဖိုင်များအတွက်စာချုပ်များ၊ အမြဲတမ်းအသုံးပြုရန်အတွက်ချက်ချင်းဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြန်ထုတ်နိုင်သည်။
•ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းတာရန်အကွာအဝေးတွင်အပ်နှံထားသောထုတ်ကုန်များ - အ ၀ တ်အထည်၊ ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစသည်တို့သို့မဟုတ်ကူးယူခံရခြင်း (စာအုပ်များ၊ တေးဂီတ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများစသဖြင့်) ။
အတွက်ထုတ်ယူကာလ ဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာထုတ်ကုန်များ (ထိုကဲ့သို့သောဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်များကဲ့သို့) ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာလက်လှမ်းမီသော့များကိုအသုံးပြုသည့်အချိန်တွင်ဆိုင်းငံ့လိမ့်မည်။
ဥပဒေ ၁/၂၀၀၇ အပိုဒ် ၁၀၃ (က) အရထုတ်ယူခွင့်သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ စားသုံးသူနှင့်အသုံးပြုသူနှင့်သူသည်စာချုပ်ကိုနောက်လိုက်များကလုံးဝပြီးဆုံးသွားသည်ကိုသူသတိပြုမိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့် ဆုတ်ခွာသူ၏ညာဘက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်.
စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောအလုပ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလက်ခံပြီးသည့်နောက်၊ Follow.online မှ၎င်းတို့စတင်မည့်နေ့ရက်ကိုသင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
resolution ကို၏ညာဘက်ကျင့်သုံးလျှင် 10 ရက်ပေါင်း ၀ န်ဆောင်မှုမစတင်မီ၊ Followers.online သည်လက်ခံရရှိသည့်ငွေကို ၁၄ ရက်ကျော်မှနောက်မကျဘဲပြန်လည်ပေးဆပ်ပါမည်။ အဆိုပါဖျောပွညာဘက်တစ် ဦး အတွက်ကျင့်သုံးခဲ့လျှင် 10 ရက်ထက်နည်းသက်တမ်း, ပမာဏ၏ 50% ပြန်ရောက်လိမ့်မည်, နောက်ပိုင်းတွင်ကျင့်သုံးလျှင်, မည်သည့်ငွေပမာဏကိုပေးဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အလားတူစွာ၊ Follower.online သည်သက်ဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုကိုအသုံးပြုသူမှမပြုလုပ်ပါကသို့မဟုတ်စာချုပ်ဖျက်သိမ်းရသည့်အကြောင်းရင်းများအပေါ်ပုဒ်မ၌ဖော်ပြထားသောလုပ်ဆောင်မှုအချို့ပေါ်ပေါက်ပါကစာချုပ်ကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။
Follower.online သည်ဖောက်သည်အား ၄ င်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပြီးလက်ခံလက်ခံလျှင်၎င်းအားပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်ရန်အခွင့်အရေးအားယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်ရေးနေ့မှတွက်ချက်သောပြက္ခဒိန်ရက် (၁၄) ရက်အတွင်းပေးဆောင်ရသောငွေပမာဏအားပြန်လည်ပေးလျော်ရန်အာမခံသည်။ Follower.online
သင်ငွေထုတ်ယူလျှင်သင်ကျွန်ုပ်တို့အားအလွန်အမင်းနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲသင်ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ခဲ့သည့်ပေးချေမှုအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်အမ်းမည်။ ဒီစာချုပ်၏နှင့်ကစာချုပ်များအကျင့်ကိုကျင့်၏စတင်ရက်စွဲမတိုင်မီ 14 ရက်အကြာမှာအကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကအတိအကျဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိပါကကန ဦး ငွေပေးငွေယူအတွက်သင်အသုံးပြုသောငွေပေးချေမှုကိုအတူတူပင်ငွေပြန်အမ်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုသင်ပြန်လည်ပေးဆပ်မှုကြောင့်သင်မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုမျှမခံရပါ။
ဤစာချုပ်၏သဘောသဘာဝဖြစ်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုရုပ်သိမ်းခြင်းကာလ (၁၄ ရက်) အတွင်းစတင်လျှင်၊ ဥပဒေ ၁/၂၀၀၇ အပိုဒ် ၁၀၈.၃ အရ၊ အွန်လိုင်း SL သည်ထောက်ပံ့မှု ၀ န်ဆောင်မှုအပါအ ၀ င်ပေးအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအချိုးကျအပိုင်းကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၃ (က) အရ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအပြည့်အဝပေးအပ်နိုင်ပါကပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
PayPal သို့မဟုတ် Stripe မှတစ်ဆင့်ငွေပေးချေမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောပြန်လာမှုကိုတူညီသောလမ်းကြောင်းမှတဆင့်ပေးလိမ့်မည်။ အခြားငွေပြန်အမ်းခြင်းအမျိုးအစားကိုဖောက်သည်မှပေးသောအကောင့်သို့ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ငွေပမာဏကိုပြန်အမ်းငွေကိုသင်၏ဆုတ်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ချက်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းကြားသည့် နေ့မှစ၍ နောက်ပြက္ခဒိန်ရက် ၁၄ ရက်တွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
သင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးသည်သူတို့၏သဘောသဘာဝအရပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာပြprovisions္ဌာန်းချက်များ၊ စွပ်စွဲချက်များ၊ လျော်ကြေးနှင့်တာဝန်ယူမှု၏ကန့်သတ်ချက်များအပါအ ၀ င်၎င်းတို့အားအပြည့်အဝပေးဆောင်ပါကဖျက်သိမ်းမှုကိုဆက်လက်ရှင်သန်လိမ့်မည်။
အသုံးပြုသူ / ၀ ယ်သူသည်တောင်းဆိုမှုသို့မဟုတ်ထုတ်ယူမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားနိုင်သည်။ info (at) Followers.online သို့အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ငွေထုတ်ပုံစံတွင်ဖော်ပြထားသည့်လိပ်စာရှိစာတိုက်မှဖြစ်စေဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ဤပုံစံကို Word တွင်ကူးယူကူးယူပြီးဖြည့်ပါ၊ အီးမေးလ်သို့မဟုတ်စာတိုက်မှပေးပို့ပါ။
အွန်လိုင်း SL ၏အာရုံကိုရန်
အောက်ဖော်ပြပါ ၀ န်ဆောင်မှု၏ ၀ န်ဆောင်မှု / ၀ န်ဆောင်မှုရောင်းဝယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်မှကျွန်ုပ်သည်တောင်းဆို / ဆုတ်ခွာကြောင်းအသိပေးပြောကြားပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အကွာအဝေးတွင်ပြုလုပ်သော ၀ ယ်ယူမှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတွက်စားသုံးသူတစ် ဦး အားစာချုပ်ချုပ်ပါကသင်၏ထုတ်ယူခြင်းအသိပေးစာတွင်အောက်ပါစာသားကိုထည့်ပါ။
ဇွန်လ ၂၄ ရက်၊ ဥပဒေ ၁၆/၂၀၁၁၊ ပုဒ်မ ၂၉ အရ၊ ခရက်ဒစ်သဘောတူညီချက်များအရကျွန်ုပ်သည်ကုန်ပစ္စည်း / ၀ န်ဆောင်မှုစာချုပ်အားဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးနောက်ဆက်တွဲချေးငွေအားဖြင့်လုံးဝ / တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရှိခဲ့ကြောင်း၊ ငါကပြစ်ဒဏ်မရှိဘဲကပြောသည်အကြွေးသဘောတူညီချက်အားဖြင့်ချည်နှောင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။
အွန်လိုင်း SL သို့စာရွက်ဖြင့်အကြောင်းကြားပါကသင်၏တောင်းဆိုချက် / ထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုမှုကိုလက်မှတ်ထိုးပါ
(နေရာ) မှ…………………………၏……………………။ ၂၀ ...
ငွေပမာဏကိုပြန်အမ်းငွေသည်သင်၏ပြန်လာခွင့်ပြုသည့် နေ့မှစ၍ နောက်ပြက္ခဒိန် ၁၄ ရက်အတွင်းပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ဥရောပကော်မရှင်သည်နောက်ဆုံးပေါ်စားသုံးသူဥပဒေအရဖုံးကွယ်ထားသောအွန်လိုင်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွင်ပconflictsိပက္ခများကိုဖြေရှင်းရန်ပထမဆုံးဥရောပပလက်ဖောင်းကိုဖန်တီးလိုက်သည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်အွန်လိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းအတွက်တာ ၀ န်ယူမှုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းရန်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတည်ရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများအားအသိပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်၊ အော်ဂဲနစ်ဥပဒေ ၁၅/၁၉၉၉ အရ၊ အွန်လိုင်း SL မှအသုံးပြုသူ / ပေးသွင်းသူများဟုသတ်မှတ်ထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဖိုင်သည်အသုံးပြုသူမှပေးသည်။ အွန်လိုင်း SL ကိုကုသမှုများအတွက်သင့်လျော်သောရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူ:
၁။ က) ကိုင်ဆောင်သူနှင့်သူမ၏ဖောက်သည်များအကြားတရားဝင် - စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု။
ဖောက်သည်နှင့်အတူဝန်ဆောင်မှုစာချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှု 2. ။
သက်ဆိုင်သူကခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းအတာအထိ၊ အသုံးပြုသူ၏တာ ၀ န်သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
Online SL သည်၎င်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုင်ရာတာ ၀ န်နှင့်၎င်းအားသိမ်းဆည်းရန်တာ ၀ န်ကိုကျေပွန်ရန်နှင့်၎င်းတို့၏ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ကုသခြင်းသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများမှလိုအပ်သောလုံခြုံရေးအစီအမံများကိုအမြဲတမ်းလိုက်နာရန်ကတိပြုသည် ရရှိနိုင်နည်းပညာ၏ပြည်နယ်အရသိရသည်။
အသုံးပြုသူသည်သင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုညွှန်ကြားပြီးအီးမေးလ်မှတဆင့်ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်အတိုက်အခံပြုခြင်းအခွင့်အရေးကိုကျင့်သုံးနိုင်သည်။ info (at) Followers.online ဥပဒေကြောင်းအရခိုင်လုံသောအထောက်အထား၊ ဥပမာ DNI ၏မိတ္တူကူးယူခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းနှင့်တူသောအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြသည်။ ဒေတာကာကွယ်မှု "။
ဤဝေါဟာရများကိုမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည် သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ အွန်လိုင်း SL ၏။
Online SL နှင့်လိုင်းအကြားဆက်ဆံရေးကိုထိန်းညှိသောစာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်အခြေအနေများတွင်စာချုပ်ချုပ်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတွင်အသုံးပြုသောအချက်အလက်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးသည်လျှို့ဝှက်ပါသည်။ လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကိုပါတီများအကြားသဘောတူညီမှုအားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသခြင်း၊ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းအတွက်အများပြည်သူသိရှိလာခြင်းသို့မဟုတ်ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်စေ၊ အရည်အချင်းရှိသောအခွင့်အာဏာတစ်ခု၏တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီဖြစ်စေထုတ်ဖော်ပြသခြင်းနှင့်၎င်းမှရရှိသောအချက်အလက်များသည်လျှို့ဝှက်အချက်အလက်ကိုနားလည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မည်သည့်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမဆိုတာဝန်မယူသောတတိယပါတီဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးနှစ် ဦး စလုံးလျှို့ဝှက်ချက်၏တာဝန်နှင့်အတူလိုက်နာရန်နှင့်အွန်လိုင်း SL နှင့်လိုင်းများ၏ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းညှိသောအထက်ပါစာချုပ်အခြေအနေများအဆုံးပြီးနောက်နှစ် (2) နှစ်အနည်းဆုံးကာလအဘို့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်။
သုံးစွဲသူမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်၊ ဓာတ်ပုံများ၊ စာသားများ၊ WordPress၊ hosting နှင့်အခြားသူများ၏အသုံးပြုသူများနှင့်စကားဝှက်များကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကိုလျှို့ဝှက်စွာကိုင်တွယ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲတတိယပါတီများသို့လွှဲပြောင်းခြင်းကိုတင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်။ ဒေတာကိုရရှိသောခဲ့ကြရသောတူညီသောရည်ရွယ်ချက်။
Follower.online သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအချက်အလက်များ၊ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တင်ဆက်မှု၊ ဆက်သွယ်မှုအခြေအနေများ၊ ကန်ထရိုက်အခြေအနေများစသည်တို့ကိုအချိန်မရွေးကြိုတင်အသိပေးမှုမရှိဘဲပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုပြုလုပ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ။ ထို့ကြောင့် USER သည်စာမျက်နှာ၏နောက်ဆုံးမူကွဲများကိုရယူရမည်။
မည်သည့်ကိစ္စတွင် Followers.online သည်သင့်ဘက်မှဖြစ်ပေါ်နေသည့်စာချုပ်ကိုမဆိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးသောအကျိုးခံစားခွင့်များ၊ အသုံးပြုမှုဆုံးရှုံးမှုများ၊ သို့မဟုတ်အမှန်တကယ်အထူးသွယ်ဝိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ဆိုက်၊ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပေါ့ဆမှု၊ သငျသညျပေးသောကိရိယာများအလွဲသုံးစားမှုကနေဆင်းသက်လာမည်သည့်မျိုး၏မတော်တဆ, အပြစ်ပေးသို့မဟုတ်အကျိုးဆက်။
Followers.online ၏တစ်ခုတည်းသောတာ ၀ န်မှာဤစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမူဝါဒတွင်ဖော်ပြထားသောစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီကြော်ငြာစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။
Followers.online သည်ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမလျော်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောမည်သည့်အကျိုးဆက်များ၊ ပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်မဆိုတာ ၀ န်မရှိပါ။
Online SL သည် Followers.online စာမျက်နှာနှင့်ဝက်ဘ်ပေါ်ရှိဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောမဂ္ဂဇင်းများပါ ၀ င်သူများ၏စက်မှုနှင့်ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အားလုံး၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်း SL ၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲအများပြည်သူသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စာမျက်နှာ၏အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ ရှေ့သို့သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်တင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါအခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်ခြင်းသည်ဤပြဌာန်းချက်များအပြင်အနုပညာနှင့်အညီအပြစ်ပေးနိုင်သောရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုပါ ၀ င်နိုင်သည်။ 270 et seq ။ လက်ရှိပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး၏။
အသုံးပြုသူသည်မည်သည့်အဖြစ်အပျက်ကိုမဆိုအကြောင်းကြားရန်၊ မှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်ပြောဆိုရန်တောင်းဆိုလိုပါကသူသည် info (at) info သို့အီးမေးလ်ပို့နိုင်သည်။ သူ၏အမည်နှင့် surname ကိုဖော်ပြသည့် ၀ န်ဆောင်မှုသည် ၀ ယ်သူ၏အကြောင်းပြချက်ကိုဖော်ပြသည်။
Online SL သို့ဆက်သွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်သံသယဖြစ်ခြင်း၊ မေးခွန်းများမေးခြင်းများပြုလုပ်လိုပါကအောက်ပါနည်းလမ်းများကိုသုံးနိုင်သည်။
Follow.online နှင့် Client အကြားစာချုပ်ချုပ်ဆိုမည့်ဘာသာစကားမှာစပိန်ဘာသာဖြစ်သည်။
Follower.online နှင့် USER တို့ကိုဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အားစပိန်ဥပဒေအရအသုံးပြုခြင်း (သို့) အသုံးပြုခြင်းမှပေါ်ပေါက်လာသောအငြင်းပွားဖွယ်ရာများကိုဖြေရှင်းရန် Granada မြို့ရှိတရားရုံးများနှင့်ခုံရုံးများသို့တင်ပြရန်အုပ်ချုပ်လိမ့်မည်။